HLELA UMBIKISHO WOKUKHALAZA | Local Government Action
Unelungelo lokuqonda emgwaqweni ukuze umashe noma utoyitoye. Isigaba 17 soMthethosisekelo sithi wonke umuntu unelungelo lokubuthana, akhombise isikhalazo, atoyitoye futhi ethule uhla lwezikhalazo ngokuthula). Ukubuthana noma ukuveza izikhalazo emphakathini kungenye indlela yokudonsa amehlo abantu abaphethe! Kodwa uma kuhlelwa imibhikisho kunezinqubo ekufanele zilandelwe. Ukuze uqinisekise ukuthi umbhikisho wakho usemthethweni, kufanele ulandele izinqubo zoMthethonqubo woMthetho wemiButhano.
Izinyathelo okumele uzithathe uma uhlela umbhikisho
Umholi ngumuntu ophethe umbuthano ngokusemthethweni, futhi onejoka lokucela imvumo kumasipala wendawo. Yibona ekuxhunyanwa nabo enhlanganweni yenu.
Gcwalisa ifomu lesaziso
Inqumo yokwazisa abaphethe endaweni imi kanje: Okokuqala, umholi ugcwalisa ifomu lesaziso alinikeze umasipala wendawo. Okwesibili, umholi uzibandakanya ezingxoxweni ezingase zibizwe umasipala wendawo.
Kufanele kuqokwe isekela likamholi, ukuze libambele umholi uma kunesidingo. Ifomu lesaziso elinemininingwane yokubuthana, imininingwane yomholi, futhi, uma kunesidingo, imininingwane yenhlangano. Umbhalo ocikiciwe wagcwaliswa unikezelwa kumasipala wendawo ukuze waziswe ngombuthano.
Imininingwane edingekayo kwifomu ibhalwe ohlwini olungezansi. Uma umasipala wendawo unganinikezi lelo fomu, umholi kufanele azakhele umbhalo ofana nalo ngokubhala phansi yonke imibuzo ngezansi futhi agcwalise izimpendulo. Kukona kokubili umholi kufanele acikice ifomu.
Thola umuntu ekufanele anikezwe isaziso
Isaziso kufanele sinikezwe umsebenzi onejoka kule ndima, ngesandla noma ngefeksi. Umsebenzi onejoka kule ndima ngumuntu oqokwe umasipala ukuze abhekane nezindaba eziphathelene nokubuthana futhi unelungelo lokugunyaza isaziso. Isibonelo, eGoli, umsebenzi obhekele umbhikisho utholakala kuMnyango wamaPhoyisa oMkhandludolobha waseGoli.
Qinisekisa ukuthi isaziso sikhishwa kusanesikhathi – okungenani izinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kombhikisho wenu
Ngokomthetho, isaziso kufanele sinikezwe umsebenzi obhekele umbhikisho okungenani ezinsukwini eziyisikhombisa ngaphambi kombuthano ohleliwe. Uma ungeke ukwazi ukuthumela isaziso ngaphambi kwezinsuku eziyisikhombisa, umholi kufanela afake izizathu zokungathumeli isaziso ngesikhathi esazisweni. Uma isaziso sithunyelwa emahoreni angama-48 ngaphambi kombuthano, umsebenzi obhekele umbhikisho anganqaba ngokomthetho ukuthi kube khona umbuthano ngaphandle kokudalula izizathu.
Vuma ukubamba umhlangano nomasipala
Ngokuvamile umholi uzocelwa ukuthi abambe umhlangano nomsebenzi obhekele umbhikisho. Lo mhlangano ubizwa ngokuthi umhlangano weSigaba 4 futhi abavame ukuba kuwo yilaba abalandelayo:
Umholi noma, uma engeke engeke akwazi ukuba khona, isekela lakhe
Umsebenzi obhekele umbhikisho
Noma omuphi omunye umsebenzi othintekayo.
Inhloso yomhlangano ukuxoxisana ngoguquko kumbuthano njengoba uhleliwe kwachazwa esazisweni. Umsebenzi obhekele umbhikisho noma omele amaphoyisa angase afune ukuthi ulandele enye indlela kunale echazwe kwisaziso ngenxa yezizathu zokuphepha.
Okubalulekile: Umhlangano weSigaba 4 ungowokubonisana kwabathintekayo. AVE kuwukuthi umasipala noma amaphoyisa bazokutshela ukuthi yini ongayenza nongavumelekile ukuthi uyenze.
Uma kuvunyelwana, umbuthano ungaqhubeka ngokulandela isaziso uma singashintshanga. Uma kungafinyelelwanga esivumelwaneni, umsebenzi obhekele umbhikisho angase aphoqe umholi ukuthi ashintshe okuthile okumayelana nemibandela umbuthano obewuhlelwe ukuthi uzoqhubeka ngayo. Uma umholi engabizelwanga emhlanganweni engakapheli amahora angama-24 ethumele isaziso, umbuthano uba semthethweni ngokuzenzakalela futhi ube ngogunyaziwe, futhi ungaqhubeka ngaphandle kwezingxoxo zasematafuleni ngaphansi kwemibandela echazwe kwisaziso.
Amaphoyisa noma umsebenzi ofanele angawuvimba umbuthano emuva kokubanjwa komhlangano lapho echazele khona umholi izizathu. Umsebenzi obhekele umbhikisho kufanele aqhamuke nezizathu ezibhalwe phansi ezigunyaza ukunqaba kakhe. Ukuze kube semthethweni ukuvimba umbuthano, umsebenzi obhekele umbhikisho kufanele kube ukuthi ubona sengathi kuzokwenzeka okunye kwalokhu futhi amaphoyisa ngeke akwazi ukuvimbela lokhu:
Umbuthano uzoholela ekuphazamiseni ukusebenza kwemigwaqo okukhulu
Kukhona abangase balimale ngenxa yombuthano
Umbuthano ungase uholele kumonakalo omkhulu wempahla.
Ungaphikisana nalesi sinqumo – uma ukholelwa ukuthi umbhikisho wakho akufanele uvinjelwe, ungaqonda kwiMantshi noma eNkantolo ePhakeme ucele imantshi noma ijaji ukuthi liphikisane naloku kuvinjwa ininikeze imvumo yokuqhubeka nombuthano.
Uma umbuthano uqhubeka noma ungavunyelwanga, uzothatha njengongekho emthethweni. Noma omuphi umuntu oye embuthanweni ongekho emthethweni wenza icala.
Uma uhlela umbhikisho qinisekisa ukuthi unamamashali kanye nezinye izishoshovu ezizolawula umbhikisho ukuvikela ukuthi uphume esandleni.
Uma amaphoyisa esebenzisa udlame noma ephula umthetho embuthanweni osemthethweni, kufanele ukhalaze emnyangweni wamaphoyisa ofanele futhi uxhumane noPhiko lokuPhenya amaPhoyisa oluziMele (IPID), oluphenya izikhalazo zobugebengu kanye nokuziphatha ngendlela engafanele kwamaPhoyisa.
HLELA UMBIKISHO WOKUKHALAZA
Okushiwo uMthetho wokuButhana.
Landa iFomu leSaziso soMbhikisho kwi-inthanethi ngaphansi koMthetho wokuButhana, 1993
uMthethonqubo woMthetho wemiButhano
IsiKhungo sokuKhuluma ngeNkululeko (FXI)
ILungelo lokuBhikisha: Incwadi yababhikishi namaphoyisa, 2007
IFomu leSaziso soMbhikisho ngaphansi koMthetho wokuBhuthana, 1993